Dhamaadka beta. Mashiinka 'Microsoft' ee loo yaqaan 'Edge browser' ayaa hadda si buuxda ugu deggan Mac M1 | Waxaan ka socdaa mac
Waxaad hadda heshay Mac-gaaga cusub Apple Silicon iyo M1 chip. Waxaad ka timid Windows oo aad uga aqoon badan tahay biraawsarka Edge marka loo eego Safari waxaadna u baahan tahay inaad awood u leedahay inaad isticmaasho. Ilaa shalay, waxaad haysatay oo kaliya nooca beta si aad ugu awoodo inaad dhexsocoto internetka oo calaamadahaaga iyo taariikhdaada si buuxda loo cusboonaysiiyay oo shaqeynayay. Si kastaba ha noqotee, Microsoft ayaa horeyba u dhamaysay wajiga tijaabada waana helnay nooca xasilloon ee biraawsarkaaga.
Dareeraha Edge ee Microsoft maahan kan ugu fiican suuqa, laakiin xaqiiqdii wax badan ayuu ka horumariyay Internet Explorer-kii hore wuxuuna aad ula mid yahay daalacayaasha kale ee suuqa ku jira Maalin kaliya waxaad haysataa nooca ugu dambeeya ee loogu talagalay Mac-yada cusub ee leh M1 chip. Laga soo bilaabo bogga rasmiga ah ee Microsoft waad soo dejisan kartaa nooca cusub. Waqtigaas waxay ku weydiin doontaa inaad doorato u dhexeeya laba nooc:
Mac la Intel chip
Mac leh jajab Apple. Tan macnaheedu waa Edge wadaniga ah mana aha in lagu turjumo iyada oo loo marayo Rosetta 2 ee Apple's Mac M1s.
Wajiga beta ayaa bilaabmay bartamihii Diseembar iyo bil iyo badh kadib waxaan leenahay noocan ugu dambeeya oo gabi ahaanba xasilloon ayaa loo heli karaa moodooyinka casriga ah ee ugu dambeeya ee kombuyuutarrada Mac (Mac mini iyo MacBook Pro 13 ″) oo leh processor-ka shirkadda u gaarka ah iyo in Tim Cook uu ku dhawaaqay sannadkii hore. Nooca cusubi wuxuu ku soo beegmayaa waqtiga saxda ah, isagoo diyaar u ah inuu wajaho sanad 2021, halkaas oo la filayo in aysan jiri doonin mar dambe Macs la shaqeeya Intel.
Qaarkood waxay horeyba isugu dayeen nuqulkan cusub waxayna ku sheegeen faallooyinka 9To5Mac, ee xilligan la joogo waxay umuuqataa sida ugu dhaqsaha badan chrome iyo inay u muuqato inay buuxineyso heerarka asturnaanta iyo amniga ee Apple u baahan tahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Dhamaadka beta. Microsoft ee loo yaqaan 'Edge browser' ayaa hadda si buuxda ugu deggan Mac M1s
Apple wuxuu "kireystaa" madaxweyne ku xigeenka Porsche chassis development